Samsung kwadoro Galaxy Note 20 na Galaxy Fold 2 maka ọkara nke abụọ nke afọ a | Gam akporosis
Samsung kwadoro Galaxy Note 20 na Galaxy Fold 2 maka ọkara nke abụọ nke afọ a
Site na enweghị mgbagwoju anya nke afọ a, ọ dị mma ịmara na ụfọdụ ngwaọrụ ka ga-abata na 2020. Ọrịa COVID-19 agbaghawo ọtụtụ atụmatụ, gụnyere Mobile World Congress 2020, ihe omume akagburu na February mgbe ọtụtụ n'ime isi ndị na-emepụta ekwentị dara.
Samsung bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ndị ahụ iji gosipụta Galaxy S20 trio na February na mmemme Unpacked, ọ bụ akụkụ nke ihe ọ ga-egosi na Barcelona, ​​o gosipụtara ekwentị Galaxy Z Flip. Ugbu a ụlọ ọrụ ahụ ekwuputala na ọ ga-ebupụta smartphones na ọkara nke abụọ nke afọ a. Galaxy Fold 2 na 20 Galaxy Note, abụọ nke ekwentị ndị na-esote ya bụ nke kachasị dị elu.
1 Ha anaghị ekpughere nkọwa n'oge ahụ
2 Ha na-arụtụ aka n'ọnwa Ọgọst
Ha anaghị ekpughere nkọwa n'oge ahụ
Firmlọ ọrụ Korea site na nkwupụta ekpugheghị nkọwa nke ngwaọrụ abụọ ahụ, n'agbanyeghị ozi a na ekwentị abụọ na-apụta ruo izu. N'agbanyeghi oke asọmpi, ọ ka ga-ahụ ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịsọ mpi na Huawei P40 na usoro Xiaomi Mi 10, mmadụ abụọ n'ime ndị isi ha taa.
De Galaxy anọ 2 asịrị ndị kachasị ọhụrụ na-egosi nke ahụ ọ ga-eburu S-Pen na 512 GB nke nchekwa dị n'ime, na nke a ga-agbakwunye ụda atọ nke igwefoto nwere ihe mmetụta 64, 16 na 12 megapixel. Ihuenyo nke ụdị nke abụọ nke Fold ga-enwe site na ume ohuru nke 120 Hz na nke 7,95 sentimita.
Enwere obere ozi gbasara Samsung Galaxy Note 20, ọ bụ ezie na onye ikpeazụ na-azọrọ na ekwentị dị elu ga-abịa na mpịakọta Exynos 992, mmalite nke 990. Exynos 992 ga-abụ nke mbụ 6 nanometer mgbawa na ndịna mgbawa na-ekwe nkwa na-nnọọ ike karịa ARM Mali-G77 MP11 GPU.
Ha na-arụtụ aka n'ọnwa Ọgọst
Ekwentị abụọ ndị ọzọ ga - apụta n'oge ụfọdụ n'August 2020, n'agbanyeghị na ha enyeghị ụbọchị ọ ga - abụ onye ahọrọ ka ọ nwee ike ịrapara na nrụpụta nke nde nkeji.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung kwadoro Galaxy Note 20 na Galaxy Fold 2 maka ọkara nke abụọ nke afọ a
Royal Crown bu uzo ihu igwe anya nke echebere megide RPG
IMO Q2 Plus: Ekwentị 4G dị oke mkpa maka ihe na-erughị euro 35